Mogadishu Journal » 2018 » July » 25
Danjire Keating oo la kulmay Madaxweynaha Puntland iyo Isimada Puntland
Mjournal :-Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kula kulmay magaalada Garoowe Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Michael Keating. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan maamul goboleedka Puntland...
Muqdisho: Qarax lala beegsaday ciidamo
Mjournal :-Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta qarax lala beegsaday baabuur ay wateen ciidamada milatariga Soomaaliya oo marayey degaanka Ceelasha Biyaha. Qaraxan ayaa lala helay baabuur, uu saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga, sida ay noo...
Wasiir C/raxmaan “Ma aqoonsanin Jaamacadaha ku yaalla dalka”
Mjournal :-Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ah Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo wareysi siinayay Somali Cable TV ayaa sheegay Wasaaradda Waxbarashada in aysan aqoonsaneyn Jaamacadaha ku yaalla dalka. Wuxuu sheegay Wasiir C/raxmaan in Jaamacadaha dalka ku...
Saldhigasho la’aanta xilalka iyo is bedeladii dhacay sanadka iyo barkii dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay dhismaha Golaha Dhaqaalaha Qaranka, kaddib markii uu soo saaray Xeer uu ku magacaabayo Golahan. Xeerka uu soo saaray Madaxweynaha ayaa ku taariikheysnaa 12-kii bishan July, waxaana lagu abuuray Golaha...
Liverpool oo dalab rasmi ah ka gudbisay Domagoc Vida
Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa billawday baacsiga difaaca xulka qaranka Croatia ee Domagoc Vida, tan iyo markii uu soo idlaaday Koobka Adduunka. Reds oo ku jirta is qalabeyn tii ugu xoogga badneyd ayaa xagaagan lasoo saxiixatay laacibiinta kala ah Alisson Becker, Fabinho,...
Wararkii ugu dambeeyay Duqeyn ka dhacday Qalimow
Mjournal :-Wararka aan ka heleyno degaanka Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in duleedka degaankaasi xalay fiidkii ay ka dhacday Duqeyn culus oo ay geysteen diyaarado dagaal. Dadka degaanka ayaa waxa ay sheegeen in mar qura ay maqleen guuxa diyaarado...
Ciidamada xoogga dalka oo gacanta ku dhigay hub u socday Al-shabaab
Mjournal :- Ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay hub u socday maleyshiyaadka Al-shabaab. Hubka ayee ciidamada xoogga dalka waxa ay ku qabteen barkontorol oo looga baxo magaalada Baardheere ee gobolka Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo la hadlay...
Ganacsato Soomaaliyeed oo lagu dilay Koonfur Africa
Mjournal :-Laba wiil oo Soomaali ah ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa lagu dilay xaafad ku taalla Galbeedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, sida ay inoo sheegeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi. Xaafada Soomaalidan lagu dilay oo ah xaafad isku raran ah ayaa...